Xarrakada Al-shabaab oo la wareegtay gacan ku heynta deegaanka Camaara ee gobolka Galguduud |
Xarrakada Al-shabaab oo la wareegtay gacan ku heynta deegaanka Camaara ee gobolka Galguduud
Galmudug (estvlive) 21/02/2017
Wararka ka imanaya deegaanka Camaara ee gobolka Galgaduud oo dhawaan ay tageen ciidamo Galmudug oo wehlinayeen ciidamada Danab ee militariga dowladda Soomaaliya, ayaa lagu waramayaa in ay la wareegeen dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab.
Goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in xoogaga Al-shabaab dab qabadsiiyeen goobo makhaayado ahaa, kuwaas oo Al-shabaab ay ku sheegeen in ay fariisin u ahaayeen ciidamadii wada socday ee toddobaadkii hore gaaray Camaara.
Waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in 20 qof ay Al-Shabaab halkaas ka ka xeysteen lamana oga halka ay la aadeen.
Camaara waxay magaalada Cadaado u jirtaa 100KM, illaa iyo hadda m ajiraan wax war ah oo kasoo baxay maamulka Galmudug oo arrintan ku aadan.
Ciidama dowladda iyo kuwa Galmudug ayaa maalmihii ugu danbeeyay isku diyaarinayay duulaan ka dhan ah xoogagga Al-shabaab ee gacanta ku haya degmada Xarardheere, hasse ahaatee waxaa muuqata in Al-shabaab ay bilaabeen howlgalo ay uga hortagayaan ciidamada wada socda.